Manchester United Oo Wadahadalo Kula Jirta Ernesto Valverde Oo Ku Aadan Booska Ku Meel Gaar Ah Ee Kooxda.
HomeWararka CiyaarahaManchester United oo wadahadalo kula jirta Ernesto Valverde oo ku aadan booska ku meel gaar ah ee Kooxda.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay kala hadlayso Ernesto Valverde suurtogalnimada uu ku noqon karo tababaraha cusub ee kooxda ilaa dhamaadka ololahan.
Michael Carrick ayaa haatan mas’uul ka ah arrimaha kooxda koowaad ee Old Trafford ka dib markii laceyriyay Ole Gunnar Solskjaer subaxnimadii Axadda.
Man United ayaa qorsheyneysa inay magacowdo tababare ku meel gaar ah inta ka harsan ololaha 2021-22 ka hor inta aysan raadin beddelka mustaqbalka fog ee Solskjaer, iyadoo madaxa Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino la rumeysan yahay inuu yahay midka ugu cadcad doorkaas.
Sida laga soo xigtay The Guardian , Red Devils ayaa kala hadashay Valverde doorkaas, iyadoo 57 jirkaan uu xiiseynayo inuu qabto shaqada kooxda inta ka dhiman xilli ciyaareedka.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Valverde uu durba bilaabay inuu ‘ku dhawaaqo ciyaartoy macquul ah’ kuwaas oo laga yaabo inay la soo saxiixdaan si kor loogu qaado kooxda inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Isbaanishka, oo lagu Xamanayo inuu ku jiro liiska shanta Macalin ee kooxda doorneyso, ayaa shaqo la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tagay Barcelona 2020 ka dib laba sano iyo bar oo uu booskaas hayay.
Valverde ayaa sidoo kale soo maamulay kooxaha Athletic Bilbao, Espanyol, Olympiacos, Villarreal iyo Valencia.